टेलिकमकाे न्यु इयर अफरः एसएमएसमा ५० प्रतिशत छूट, रु. ५० मा १०० एमबी डाटा | Nagarik News - Nepal Republic Media
टेलिकमकाे न्यु इयर अफरः एसएमएसमा ५० प्रतिशत छूट, रु. ५० मा १०० एमबी डाटा
काठमाडौं– नेपाल टेलिकमका नयाँ वर्ष २०७३ को उपलक्ष्यमा जिएसएम र सिडिएमए मोबाइल फोनका आफ्ना ग्राहकहरुका लागि नयाँ अफर ल्याएको छ।
उक्त मोबाइल फोनका ग्राहकहरुले चैत ३० गते मंगलबादेखि वैशाख १ गते बुधबारसम्म टेलिकमकै नेटवर्कभित्र गरिएन एसएमएलमा ५० प्रतिशत छूट दिने भएको छ। त्यस्तै, जिएसएम मोबाइल(प्रिपेड र पोष्टपेड)का ग्राहकहरुका लागि मंगलबारदेखि बिहीबारसम्मका लागि रु. ५० मा १०० एमबी डाटा उपलब्ध गराउने टेलिकमले जनाएको छ। उक्त तीन दिनभित्र लिइएकाे डाता प्रयाेगकाे अवधि भने ७ दिनकाे हुने जनाइएकाे छ।
टेलिकमले सोमबार विज्ञप्ती जारी गरी यस्तो जानकारी दिएको हो।
प्रकाशित: ७ वैशाख २०७३ ०८:२४ मंगलबार
टेलिकमकाे न्यु इयर अफरः एसएमएसमा ५० प्रतिशत छूट रु. ५० १०० एमबी डाटा